Ciidamadii Kenya uga Dhaawacmay Ceel-cadde oo Nairobi la geeyay – Radio Jowhar
Ciidamadii Kenya uga Dhaawacmay Ceel-cadde oo Nairobi la geeyay
RADIO JOWHAR: Tiro aan la cayimin oo ka tirsan ciidamadii Kenya ay ku dhaawacmay weerarkii Al-shabab ay ku qaadeen saldhiga Ceel-cade ee gobolka Gedo ayaa la gaarsiiyay wadankaais Kenya markii ugu horeysay.
Wasiirka arimaha gudaha Kenya Jeseph Nkaissery ayaa sheegay in askartan lasoo qaaday ay qabaan dhaawacyo kala duwan , oo ay ku jiraan kuwa dhaawacoodu uu aad u daran yahay balse sida ugu deg-degsan ay rajeenayaan in loo daaweeyo.
Inkastoo aysan dowlada Kenya si guud usoo bandhigay tirada askarta ugadhimatay iyo kuwa uga dhaawacmay weerarkii Ceel-cadde ayuu Nkaissery u balanqaaday dadka reer Kenya inay usoo bandhigi doonaan tirsiga ciidamada la dilay.
“Al-shabab waxay kala kulmeen dhankooda weerarkaasi khasaare aad u xoogan intii uu socday weerarka 12 saacadood, goor dhow ayeynu soo bandhigi doonaan xogta dhabta ah” sidaa waxaa yiri Wasiirka arimagha gudaha Kenya.
Al-shabab afhayeenkooda Ali Dheere waxa uu sheegtay in weerarkaasi Ceel-cade ay ku dileen in kabadan 100 kenyan askar ah inkastoo dowlada Kenya aysan iyana soo bandhigin tirada dhankooda, hadana aad bey u adagtahay in si madaxbanaan loo xaqiijiyo tirada Al-shabab iyo Kenya weerarkaasi ugaga dhimatay.
Weerarka Ceel-cade ayaa u noqday ciidamada Kenya kii ugu xumaa ee ay gudaha Soomaaliya kala kulmaan tan iyo soo gali taankoodii sanadkii 2011.